China and Zim’s silent economic revolution
CHINA and Zimbabwe signed nine bilateral cooperation agreements during President Robert Mugabe's recent state visit to China, as the two countries strengthened economic and political relations, Chinese ambassador to Zimbabwe Lin Lin told Xinhua Tuesday.
Lin said Mugabe's visit from Aug. 24 to Aug. 28 was successful and fruitful in promoting mutual political trust and pragmatic cooperation, and China was ready to work together with Zimbabwe to promote the comprehensive and in-depth development of the bilateral relations to further benefit the peoples of both countries.
Under one of the deals, the Export and Import Bank of China, or China Eximbank, will provide a 218-million-U.S.-dollar concessional loan to fund network upgrading of Zimbabwe's state- owned telecom firm NetOne, one of the three mobile phone operators in Zimbabwe.
Lin added that as Chinese President Xi Jinping had said the Chinese side supported Zimbabwe's efforts to develop the economy and improve people's livelihood, and would continue to cultivate construction talents for Zimbabwe.
He said China was ready to take part in the construction of Zimbabwe's special economic zones and industrial parks, to enable them to play a leading role in the cooperation in infrastructure construction, mining industry, manufacturing and other fields, and will encourage more Chinese companies to invest in Zimbabwe.